အမေးအဖြေများ - Ningbo ZKLS
ကျနော်တို့ချောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းဝယ်ယူမှုအနေဖြင့်တင်းကြပ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစီမံထားသည်။ ကျနော်တို့အများဆုံးအရည်အသွေးနှင့် safety.The တတိယပါတီနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုပါလိမ့်မည်ပေး။
ငါ OEM အလို့ငှာစေနိုင်သလား?
ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုး။ ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးပါသို့မဟုတ်ဖောက်သည်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။
စျေးဝယ်အိတ်၊ ပန်းရောင် PU စျေးဝယ်အိတ် ၊ မီးခိုးရောင် PU စျေးဝယ်အိတ် ၊ နေ့စဉ်အိတ်၊ အဖြူရောင် PU စျေးဝယ်အိတ် ၊ PU အိတ်စျေးဝယ် ၊